Mahay milaza vazivazy tena tsara i Bill Gates ... tsy mino azy ve ianao? | Avy amin'ny Linux
Bill Gates dia mahay milaza vazivazy tena tsara… tsy mino an'izany ve ianao?
Isaac | | Android, About us
DAVOS / SWITZERLAND, 25JAN08 - William H. Gates III, filoha, Microsoft Corporation, Etazonia, dia nalaina nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nandritra ny fivoriana fanao isan-taona 2008 an'ny World Economic Forum tany Davos, Suisse, 25 Janoary 2008.
Fizakàmanana avy amin'ny World Economic Forum swiss-image.ch/Photo avy amin'i Andy Mettler
+++ Aza asongadina, aza arisiva +++
Ilay miliardera ary ex Microsoft, Bill Gatesindraindray milaza zavatra mahaliana. Iray amin'ireo farany ny fehezanteny iray tao amin'ny Microsoft Windows Mobile izay tsy namela ny olona tsy hiraharaha ary heveriko fa tsy mety izany, na dia miezaka mafy hiaro ny orinasany aza izy ary manarona ny tsy fahombiazan'ny Windows Mobile. Mino marina aho fa Microsoft dia nahomby tamin'ny lafiny maro, saingy tsy toy izany ny rafitra fiasan'izy io ho an'ny finday.
Fotoana vitsy lasa izay, nanameloka ilay orinasa ny mpitsara amerikanina amin'ny fampiharana ampihimamba. Azo antoka fa nisy fiatraikany tamin'i Microsoft ny raharaha antitrust, na dia tsy azoko antoka hoe lehibe loatra izany, ary raha izany dia heveriko fa tsy misy ifandraisany amin'izay nolazain'i Bill Gates izany. Fa maninona aho no miteny an'izany rehetra izany?
Eny, satria i Bill Gates dia naneho hevitra tamin'ny haino aman-jery Britanika The New York Times fa «Tsy misy isalasalana fa ny akanjo antitrust dia ratsy ho an'i Microsoft ary izahay dia nifantoka bebe kokoa tamin'ny famoronana ny rafitry ny finday. Raha tokony hampiasa Android ianao dia hihazakazaka Windows Mobile ianao raha tsy teo ilay 'antitrust case'. […] Tena akaiky izahay. Ankehitriny tsy mbola nisy naheno momba ny WIndows Mobile. Fa hey, zato miliara vitsivitsy etsy sy eroa. (amin'ny vidin'ny fizotrany) ». Eny… ummm, heveriko fa, amin'ny fanajana feno, tsy izany no izy.
Tsy noeritreretin'i tycoon fa fahadisoan'ny fampiharana izany, na ny fivoaran'ny teknolojia finday, na zavatra hafa toa izany, fa ity raharaham-pitsarana ity. Ary araka ny nambarany dia mieritreritra izy fa raha tsy nisy izany dia ny rafitra miasa no Windows Mobile. Saingy heveriko fa ny rafitra mifototra amin'ny Windows NT dia mety ho ny tsara indrindra amin'ny sehatra finday sy afaka miatrika iOS sy Android, Manana fisalasalana lehibe aho, ny marina. Nanam-potoana hijerena finday smartphone Sony Xperia miaraka amin'ny Windows Phone aho ary io no traikefa nahatsiravina indrindra tamin'ny fampiasa sy ny endriny hafa… Nahazo hafanam-po ilay vokatra ary tamin'ny farany dia niandry fatratra aho. Na dia ... hey! Nisy zavatra hafahafa nitranga. Fantatr'izy ireo tokoa ny fomba fanaovana ny Windows ho sehatra lehibe indrindra amin'ny birao. Angamba nanana paikady vitsivitsy izy ireo hahazoana ny fizarana finday koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Android » Bill Gates dia mahay milaza vazivazy tena tsara… tsy mino an'izany ve ianao?
Diego de la Vega placeholder sary dia hoy izy:
Matanjaka tokoa i Brexit ka nanapa-kevitra ny New York Times fa ho lasa outlet British.
Ankoatra ny vazivazy, tsy tratra akory ny Windows Mobile, ary tsy nisy koa ny fanandramana nataon'i Ubuntu.
Valiny tamin'i Diego de la Vega
Dark dia hoy izy:
haha dia nitovy ihany ny eritreritro.
Mario tello dia hoy izy:
Tamin'ny fotoana nananganana i Bill ho latabatra be mpampiasa indrindra, dia te ho ao an-trano rehetra izy miaraka amina PC ary nahomby izy
Valiny tamin'i Mario Tello
Elizabeth saavedra dia hoy izy:
ny hitako tato ho ato amin'ity olana ity dia ny hoe manafangaro ny Windows Mobile amin'ny Windows Phone hatrany ny olona. fa sady tsy mitovy no tsy mitovy.
Windows Mobile dia mpisava lalana amin'ny zavatra maro, ary io dia rafitra nankafy ny lazany tamin'ny androny. Izy io dia nanana fampiharana an'arivony, ho an'ny zava-drehetra manomboka amin'ny birao fandefasana automatique ka hatramin'ny emulator, ny rom roming dia tsy noforonina amin'ny android, fa natombony tamin'ny windows mobile. Ireo vondrom-piarahamonina goavana toa ny XDA androany dia nanomboka ho toy ny vondrom-piarahamonina miorina amin'ny finday, (XDA mihitsy no nanomboka ho forum natokana ho an'ny O2 XDA, fitaovana Windows Mobile).
Io rafitra io ihany no mialoha ny iOS mandritra ny taona maro. ka mety marina ny vavahady. Hatramin'ny nanamboarana ny Mobile nandritra ny taona faramparany tao amin'ny Microsoft, mpandimby an'i Mobile, ny Windows Phone dia vokatra kokoa tamin'ny vanim-potoanan'ny mpandimby Ballmer, izay najanona tamin'ny alàlan'ny nandimby an'i Ballmer, Nadella.
Valiny tamin'i Elizabeth Saavedra
Stratis, vahaolana fitantanana fitehirizana eo an-toerana ho an'ny Linux
Ny vondrona Khronos dia mamorona torolàlana ho an'i Vulkan